အားလပ်ရက် — Steemit
အားလပ်ရက်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဖြစ်ရသောအချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအားကစားအတွက်လုပ်ကြသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာကိုလိုက်ရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ရက်များအတွက်မြောက်မြားစွာအစီအစဉ်များလုပ်ပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာမပြည့်စုံကြသည်မဟုတ်။ ဒီအတှကျအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအခြိနျဆှဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအများကြီးလုပ်ပေးပေမယ့်များသောအားဖြင့်ပျင်းရိရသာအားလပ်ရက်ရဲ့အဆုံးမှာနောင်တဖို့အချိန်ကွာညစ်ချင်တယ်။
သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်များ၏အများစုမှာ Make ရန်နည်းလမ်းများ?
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင် Leave မနေပါနဲ့
အားလပ်ရက်ဤအမှုအရာအပေါ်ကြံဖန်ရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်တကယ်တော့သင့်ရဲ့လေ့လာမှုများသို့မဟုတ်အလုပ်ကနေချိုးယူမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်သင်၏အလုပ်စွန့်ခွာသို့မဟုတ် (အထူးသဖြင့်ရှည်လျားအားလပ်ရက်ကာလအတွင်း) သင့်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းလေ့လာ အကယ်. သင်သည်သင်၏ရုံး / ကျောင်းကပြန်လည်စတင်ကြောင့်အလွန်ခက်ခဲကြောင့်ပြန်ရဖို့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်မကျေနပ်မှုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်သင်မှန်သောအရာတို့ကိုသတ်မှတ်ထားရန်နောက်ထပ်အားလပ်ရက်တောငျ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်သင့်ရဲ့ချိုးစဉ်အတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရာတို့ကိုစောင့်မရှောက်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပြန်ရ။
သင့်ရဲ့ဝါသနာ / စိတ်ဝင်စားမှုကိုလိုက်နာပါ
ဒါဟာဝါသနာလူတန်းစား join ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကခုန်, ရေကူး, ယောဂ, ပန်းချီ, ပုံကြမ်းသို့မဟုတ်ဂီတအဖြစ်သင့်ရွေးချယ်မှုဘာမှအတွက်လုပ်ကြ။ ယူပါ-up, တိုတောင်းတဲ့သင်တန်းသင်ရှိသည်အားလပ်ရက်၏နံပါတ်ပေါ် မူတည်. တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ် 10 ရက်ဖြစ်သည်။
လူမှုရေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျနော်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hectic လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မရကြဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မုချကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အချိန်ကိုထုတ်ယူပါ။
သင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဘဝကနေချိုးယူသင့်မိသားစုဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခရီးအဘို့အသွားပါ။ ခရီးများထွက်လန်းဆန်းဖြစ်ကြသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါငါ့နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းတဦးတည်းခရီးစဉ်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အသွားမယ့်အချက်ပါစေ။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သင့်မိသားစုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ မိသားစုအစဉ်အမြဲပထမဦးဆုံးလာ! ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အချိန်ဖြုန်းရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့နှောင်ကြိုးခိုင်ခံ့စေဖို့သင့်ရဲ့အဘိုးအဘွား, မိဘများနှင့်မောင်နှမနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။
အားလပ်ရက်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဘွန်းမှတို့သည်ကြီးစွာသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်နုပျိုဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအချိန်အများဆုံးပါစေ။
#good-karma #holiday #travelling #life